ဂျော့ချ်တောင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီးဖျက်ဆီးပစ်သောအတန်းများ - နှုန်းထားများ
Patagonia ဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ဆော်လမွန်ဘောင်းဘီတွေကမင်းအနားမှာထိုင်နေတာ (ငါ့လက်ဝဲဘက်မှာလားငါ့ရဲ့ညာဘက်လား?) ကိုလှုပ်ခါနေတဲ့သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူသားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင်ဘယ်တုန်းကမှမပြောခဲ့ဖူးတဲ့ cutie ကအခန်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့စကားလုံးဟာသင်ကတိသစ္စာကိုရွတ်ဆိုခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ပျှမ်းမျှကျောင်းသားတစ် ဦး သည်တစ်ပတ်လျှင် ၁၅ နာရီသင်တန်းဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်သင်၏တာ ၀ န်များအားလုံးအပေါ်တွင်တာ ၀ င်သည်နှင့်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမတိုင်မီသင်ရွေးချယ်သောသင်တန်းများသည်သင်၏အချိန်ကိုမည်သို့အချိန်များစွာဖြုန်းနေသည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ကောင်းသောစာသင်ခန်းသည်သင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ နေ့တိုင်းအတန်းတက်ရန်သင်မျှော်လင့်နေပြီးသင်မယုံနိုင်လောက်အောင်သင်ယူနိုင်သောကံကြမ္မာပါမောက္ခတွင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ရရှိမည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ဖတ်ချင်လျှင်တောင်မှသင်နှင့်အတန်းဖော်များနှင့်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်၊ သူတို့နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနာရီပေါင်းများစွာကသတ်မှတ်ထားသောမဖြစ်နိုင်သည့်ရူပဗေဒပြproblemနာနှင့်ပူးပေါင်းခြင်း။
မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပြီးပါကသင်၏အတန်းသည်သင်ယူခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသတိရစေလိမ့်မည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်နည်းနည်းလေးကွဲပြားခြားနားစွာသင့်ဘ ၀ ကိုပုံဖော်ရန်အတွက်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
တစ် ဦး sexy ဝတ်လစ်စလစ်ယူဖို့ဘယ်လို
* မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: သင်တန်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီသင့်ဌာနမှူးနှင့်ပြောဆိုပါ။
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ဝေးလံခေါင်သီ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်လူတန်းစား၌ငါ့ STIA ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းပူးတွဲသင်ကြားပေးသည့်ပါမောက္ခအားလုံးမှာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတန်းစားကြောင့် STIA-pre-med ဖြစ်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါတကယ်သူတို့ကိုချစ်သောကြောင့်, ငါတို့ဖတ်တာဝန်မခံခဲ့ရသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးယူနစ်စဉ်အတွင်းတနေ့ငါတကယ်ဝမ်းနည်းခဲ့ပါတယ်။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း ငါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ထိုတ ဦး တည်းကို Ace မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီ Econ ငါ့နောက်ဆုံးစာသင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Barry Goldsmith, အငယ်တန်း၊ MSB
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ပါမောက္ခကွတ်နှင့်အတူစီးပွားရေးဥပဒေဖြစ်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့ကတစ်ခုတည်းသောစီးပွားရေးအတန်းအစားနဲ့တူပေမယ့်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကဒီကိုယူဖို့ပြောခဲ့တယ်။
ပါမောက္ခကွတ်ဟာရယ်စရာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိ၊ ဂရုစိုက်တယ်၊ သူဟာပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ သူသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့် (ရှုပ်ထွေးသော) အကြောင်းအရာကိုတင်ပြသည်။ သူ၏အတန်းသည်သူ၏ကျောင်းသားများကိုတက်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
လုကာ Gile, Sophomore, SFS
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ငါ၏အလက်ရှိဘာသာရေးလူတန်းစား, Freud ပြီးနောက်ဓမ္မ။ အဲဒါကကျွန်မကိုအရမ်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှာဖို့အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစေတယ်။
ငါ့အသက်ကိုပျက်စီးသောလူတန်းစား ငါအရာအားလုံးကိုပြီးပြည့်စုံသောယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်, ငါမက်ခရို / Micro ဘောဂဗေဒဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။
Beatrice Fabris, အကြီးတန်းကောလိပ်
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ကျင့်ဝတ်သီအိုရီပါ။ ပါမောက္ခကာစီကဒီသင်တန်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ သူမသည်လုံးဝစိတ်ကူးယဉ်ပြီးကျွန်ုပ်အတန်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်ချက်ကိုအမှန်တကယ်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်စဉ်းစားရန်တစ်ခါမှမကြိုးစားခဲ့ပါ။ ငါထွက်လာတဲ့အတန်းတိုင်းကပိုစဉ်းစားဟန်၊
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း Microeconomics (အတန်းကိုယ်နှိုက်ကအထူးသဖြင့်မကောင်းခဲ့လို့မဟုတ်ဘဲ၊ ယနေ့ခေတ်နှင့်ခေတ်တို့တွင်ဘောဂဗေဒသည်အလွန်အစွမ်းထက်သော်လည်း၊ အချို့သောနေရာများတွင်မူထင်ရာစိုင်းသည်ဟုထင်မြင်မိခြင်းကြောင့်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ )
Adrienne ဂျက်ဆင်, အကြီးတန်း, ကောလိပ်
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း အင်္ဂလိပ်အတန်းအစားစာပေသမိုင်း II ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအစဉ်မရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် [ပါမောက္ခဒီတော့] အတန်းထဲမှကျွန်တော်သင်ယူခဲ့သောအရာများသည်ဘ ၀ အတွက်မည်သို့အသုံးဝင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း ဘုရားသခင်၏ပြProbleနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နဲ့ပြproblemsနာများစွာရှိတယ်။
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ဟုတ်တယ် ပြဇာတ်ရုံနှင့်ကက်သလစ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ သင်ကဂျော့ချ်တောင်းအတန်း၏ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှသင်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားနိုင်သည့်စာသင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကသာမန်ကလေးများထက်အတန်းထဲမှအခြားကလေးများနှင့်ပိုမိုနီးစပ်လာနိုင်သည်။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း ခေတ်သစ်တောင်အာရှဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်မရှိပါ။
ဝီ Fonseca, အကြီးတန်း, ကောလိပ်
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ဘုရားသခင်၏ပြProbleနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပထမနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ကျဆုံးခြင်းကိုယူပြီးကောလိပ်ပညာရေးဘ ၀ အတွက်ကြီးကျယ်တဲ့နိဒါန်းတစ်ခုအဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သည်။ အဖေစတိတ်သည်အံ့သြဖွယ်ပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ချက်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း ဂီတသီအိုရီမှ Intro ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါကအဲဒါကိုလိုအပ်တဲ့သင့်တော်တဲ့အာရုံမပေးခဲ့ဘူး။ အတန်းငါထင်လိမ့်မယ်ထက်အများကြီးပိုခက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ညစဉ်ညတိုင်း HW တာဝန်တွေပါဝင်သည်တက်အဆုံးသတ် - ငါပဲပျင်းရိတာကြောင့်ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။
Ebby Goggins, Sophomore, ကောလိပ်
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ဇီဝဗေဒ၏အုတ်မြစ် ၁ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ရသော်လည်းစာသင်နှစ်အကုန်တွင်ကျွန်ုပ်အတန်းထဲတွင်ယခင်ကထက်ပိုမိုသင်ယူခဲ့ပြီးထိုအသိပညာကိုလက်တွေ့ဘဝတွင်အသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း ငါခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအစပြုခဲ့တာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအတန်းတက်ရတာတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည့်အတန်းအစားကိုယူခြင်းထက်၎င်းလွယ်ကူသော A ကိုရရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားထက်အဆင့်များကိုထားခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပျက်မိသည်။
Jake Steinberg, Sophomore, ကောလိပ်
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း Acting I. ကိုလုပ်ခဲ့တာ။ ဒါဟာကမ္ဘာကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းပဲ။ ပျော်စရာအတန်း။ ကြီးမြတ်သောဆရာ။ ဂရိတ်အသိုင်းအဝိုင်း။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း ကျင့်ဝတ်မှ Intro ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည်အခြေအနေများဂရုစိုက်။ ကန့်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်းတယူသန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Brennan, အငယ်တန်း, ကောလိပ်
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု ၁ ကအမေရိကန်လေ့လာရေးမိတ်ဆက်သင်တန်းဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါဟာစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့သိချင်စိတ်ပြင်းပြမှုကိုရှာဖွေပေးခဲ့တယ်။
ငါ့အသက်ကိုပျက်စီးသောလူတန်းစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ ငါဂျော့ချ်တောင်းမှာမဆိုသင်တန်းမပြောနိုင်ပါ။ သင်တန်းကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်, ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းစဉ်မခံမရပ်ဖြစ်စေ, ငါ့ကိုကျော်ဆေးကြောခြင်းနှင့်ငါ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းခင်းတဲ့လမ်းအတွက်ငါ့ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့တောင်မှမကြာသေးမီ grad ထံမှတုံ့ပြန်ချက်အချို့ရတယ်!
Alex Zajac (ကောလိပ် '15)
ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအတန်း ငါ၏အ freshman လစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖြစ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပါမောက္ခများ၏လမ်းညွှန်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အရေးအသားမှာများစွာတိုးတက်ခဲ့ပြီးအော်ပရာတွင်ပျော်မွေ့ရန်ပင်သင်ယူခဲ့သည်။
ငါ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးသောအတန်း အဆင့်မြင့်စပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။ ငါတကယ်တော့ဆုတ်ခွာရတော့မှာမို့ဌာနကသူတို့လာမယ့်နေ့မှာတာဝန်တွေဆက်ပြောနေလို့ပါ။